Inona no hatao any Cuzco (Peroa): torolàlana azo ampiharina amin'ny fitsidihanao ny tanàna | Vaovao momba ny dia
Inona no hatao any Cuzco (Peroa): torolàlana azo ampiharina amin'ny fitsidihanao ny tanàna
Cuzco no renivohitry ny fanjakana Inca ary, tamin'ny andron'ny fanjanahantany, nanjary iray amin'ireo tanàna manan-danja indrindra amin'ny Viceroyalty of Peru. Tsy mahagaga, noho izany, fa ny ivon'ny fanjakana lehibe indrindra tany Amerika alohan'ny Columbian ankehitriny dia mitahiry ny hakanton'ireo toerana niainana ny tantara. Manamarina izany ny UNESCO, izay, tamin'ny 1983, nanambara ny Cuzco Lova manerantany.
Manintona ny tanàna ny iray hafa harena manan-karena. Ho miorina amin'ny Andes Mountains, amin'ny 3399 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina, dia misy toetr'andro manokana izy io izay manome azy ny harena voajanahary lehibe. Ka raha mitsidika an'i Peroa ianao, Cuzco sy ny manodidina azy dia tokony ho fijanonana tsy maintsy atao amin'ny lalanao.
Mba tsy hahadino anao ny iray amin'ireo tontolo voajanahary, harena arkeolojika ary tsangambato ao amin'io faritra io, dia hatolotro anao amin'ity lahatsoratra ity lisitra miaraka amin'ireo toerana mahaliana indrindra azo tsidihina ao Cuzco ary homeko anao ny fampahalalana momba ny hetsika sy fitsangatsanganana azonao atao any akaikin'ny tanàna.
1 Inona no hitsidika ny tanànan'i Cuzco
1.1 Ny votoatin'ny Inca an'ny Cuzco
1.1.2 Ny vato amin'ireo zoro 12
1.2 Mizotra amin'ny alàlan'ny lova an'ny Viceroyalty
1.2.1 Tanàna manodidina an'i San Blas
1.2.2 Katedraly Cuzco
1.2.3 Fiangonan'i Cuzco
1.3 Fantaro ny tanàna amin'ny fomba fijery hafa
1.3.1 Ny tsenan'i San Pedro
2 Inona ireo fitsangatsanganana azonao atao avy any Cusco
3 Torohevitra azo ampiharina amin'ny dianao mankany Cusco
3.1 Ahoana ny fanovana vola any Cusco
3.2 Ahoana ny fomba handehanana any Cuzco
3.2.2 fiara fitateram-bahoaka
3.3 Tapakila fizahantany Cusco
3.4 Fitsangantsanganana maimaim-poana
3.5 Mitandrema amin'ny aretina any an-toerana!
3.6 Rano sy sakafo
Inona no hitsidika ny tanànan'i Cuzco
Ny votoatin'ny Inca an'ny Cuzco
Araka ny angano mpanorina, Cuzco dia namorona an'arivony taona maro lasa izay tamin'ny alàlan'ny famolavolana ny andriamanitra Quechua an'ny Masoandro, Inti. Na misy aza izy ireo angano samihafa manodidina ny fananganana ny tanàna, Hozaraiko aminao ilay naparitaky ny Inca Garcilaso de la Vega. Io no voalohany nolazain'izy ireo tamiko rehefa tonga tany Cuzco aho, ary angamba noho izany dia toerana iray manokana no tadidiko.
Araka ny angano, an'arivony taona lasa izay, ny andriamanitra masoandro dia nandefa ny zanany roa lahy teto an-tany, Manco Cápac sy Mama Ocllo, miaraka amin'ny lahasa hananganana tanàna vaovao. Nandeha sambo teo amin'ny Farihy Titicaca ireo rahalahy, niaraka tamin'izy ireo tsorakazo volamena, rehefa tonga tany Cuzco ankehitriny, dia nofantsihina tamin'ny tany tamin'ny daroka iray monja. Arak'izany dia tapaka ny hevitra fa iza no toerana voatendry hananganana an'io tanàna vaovao io
Ankoatra ny angano rehetra, ny zava-misy voaporofo ara-tantara dia izany Cuzco no ivon'ny herin'ny Empira Inca Na dia ankehitriny aza dia mbola voatahiry ao an-tanàna ihany ny lovantsofina iray amin'ireo sivilizasiôna manandanja indrindra sy taloha any Amerika atsimo. Raha te hahafantatra an'i Cuzco ianao dia tokony hanomboka amin'ny fakany izany, izany no antony tiako hizarana aminao ny sasany amin'ireo toerana izay hanampy anao hahita ny votoatin'ny Inca an'ny Cuzco.
Qorikancha no Tempolin'i Inca lehibe naorina tao Cuzco. Ny anarany dia avy amin'ny firaisan'ny teny Quechua roa: "quiri", volamena, ary kancha, tempoly. Ao amin'ity "tempoly volamena" ity Hind, andriamanitry ny Masoandro no notompoina. Ny firafitra goavambe sy ny haingon-trano mendri-piderana dia fanomezam-boninahitra an'ilay andriamanitra. Ny teo aloha dia vita tamin'ny rindrina vato ary, arak'ireo kaonty tamin'ny androny, dia nasiana karazana sisintany volamena madio.
Mampalahelo fa tamin'ny fahatongavan'ny Espaniôla dia nanjavona ny fisehoan'i Qorikancha tany am-boalohany ary, mitahiry ny rindrin'ny tempoly, naorina ny trano masin'i Santo Domingo (1963), ny voalohany amin'ny filaharana Dominikana any Peroa. Ny fototra Inca dia norakofana plaster sy sary hosodoko katolika, hatramin'ny tamin'ny 1650 dia nisy horohoron-tany nianjera tamin'ny ampahany tamin'ny trano, manangana ny sisa tavela amin'ny tempoly taloha. Aza adino ny mitsidika an'i Qorikancha, ohatra tsara amin'ny maritrano hybrid ary velona rtaratry ny dingana namolavola ny Cuzco ankehitriny.
Ny vato amin'ireo zoro 12
Ny vato zoro 12, miorina amin'ny arabe Hatum Rumiyoq, dia a vato vato "diorite maintso" izany dia ampahany tamin'ny Lapan'ny Inca Roca. Vato afovoan'ny rindrina manana zoro 12, noho izany ny anarany, voasokitra tamin'ny tena marina ary mivoria tsara miaraka amin'ireo sisa tavela. Ity karazana firafitra ity, izay fahita eo amin'ny kolontsaina Inca, dia namela ny hametahana ireo vato tsy nisy karazana feta. Ireo lapa sy tempoly naorina amin'ity fomba ity dia mbola mijoro dia porofon'ny maha-mafy orina azy ireo.
Ny lapan'andriana, namboarina tamin'ny baikon'i Inca Roca, dia tranon'ny taranany ihany koa mandra-pahatongan'ny Espaniola (taonjato faha-XNUMX). Tamin'ny vanim-potoana fanjanahantany dia nesorina izy io ary, mitazona ny rindrina malaza ho fototra, ny Espaniola dia nanangana ny tranon'ny Marquis of Buenavista sy ny lapan'ny Marquis an'i Rocafuente. Farany, ny trano dia natolotra ho an'ny fiangonana ary lasa lapan'ny Arseveka. Amin'izao fotoana izao, izy koa dia Museum of Art Religious of the city of Cuzco.
Na dia priori aza heverinao fa tsy dia hetsika manintona loatra ny mahita rindrin'ny vato dia mamporisika anao aho mba tsy hanadino an'io fijanonana io rehefa mitsidika an'i Cuzco ianao. Ny refin'ny vato sy ny fahalavorarian'ny rafitra dia tsy hamela anao tsy hiraharaha. Ho fanampin'izany, rehefa eny amin'ny arabe ho an'ny besinimaro ianao dia tsy mila mandoa na inona na inona hitsidihana azy ary tsy mila mahafantatra ny fandaharam-potoana rehetra ianao, afaka mitsidika azy ianao na oviana na oviana ny andro.
Rehefa miresaka momba ny sisa tavela amin'ny arkaolojika Inca isika dia mieritreritra mivantana an'i Machu Pichu. Na izany aza, any Cuzco dia misy toerana arkeolojika hafa sy ny sisa tavela amin'ireo tanàna taloha izay azo tsidihina. Na dia toerana tsy mpizahatany aza izy ireo, dia mahaliana ihany ary ny ampahany amin'ny fijanonanao ao an-tanàna mba hahitana azy ireo dia tsy isalasalana fa fahombiazana lehibe.
Tena akaiky an'i Cuzco, sahabo Dia an-tongotra 30 minitra avy eo amin'ny Plaza de Armas, dia ny Sisan'ireo Sisan'i Sacsayhuamán. Ny trano mimanda Inca dia miorina eo an-tampon'ny havoana misandratra, amin'ny toerana mahavariana. Raha ny marina, avy amin'ny rava dia azonao atao mankafy ny iray amin'ireo fomba fijery mahavariana an'i Cusco. Ny "Sacsayhuamán" dia teny iray izay avy amin'ny Quechua ary azo adika hoe: "toerana anafahana ny falcon", angamba ny hena manidina eo ambonin'ireo asa maritrano lehibe no manome ilay anarana.
Sacsayhumá dia tanàna tena misy, lehibe tokoa, izay x ha ihany no voatahiry. Nahitana karazana fananganana isan-karazany: trano masina sy fombafomba, trano fonenana, tilikambo, lakandrano ... Ao amin'ny tanànan'ny Inca dia mbola misy tionelina, vavahady, rindrina ary tilikambo ary na dia ampahany lehibe aza no very, Mora ny maka sary an-tsaina ny habeny sy ny famirapiratany teo aloha.
Mizotra amin'ny alàlan'ny lova an'ny Viceroyalty
Nanova tanteraka ny tanànan'i Cuzco ny vanim-potoana fanjanahantany. Taorian'ny nahatongavan'ny Espaniôla dia tranobe Inca maro no rava na novana, nanatambatra tanàna iray izay ny fomban'ny Inca dia miara-monina amin'ny barika ampidirin'ny mpifindra monina. Taorian'ny horohorontany tamin'ny 1650 dia tranobe maro no natsangana tao an-tanàna, namorona a Cuzco mampiavaka ny fisian'ny tranobe ara-pivavahana. Mahavariana ny maritrano zanatany Cuzco ary mendrika hotadiavina amin'ny antsipiriany. Nozaraiko taminareo ireo izay, farafaharatsiny ho ahy, teboka tena ilaina raha te-haka sary an-tsaina ny halehiben'ny renivohitra Inca ho an'ny Viceroyalty of Peru ianao.
Tanàna manodidina an'i San Blas
Ny Barrio de San Blas dia nohavaozina tanteraka tamin'ny fahatongavan'ny Espaniola, araka izany ohatra tsara amin'ny maritrano kolonialy izy io. Ny arabe mideza, ny gorodony vato ary ny fivarotana izay apetraka an-dalambe dia manome fiainana manokana ity ary mahaliana ny mpizahatany tokoa.
Ao amin'ny Plaza de Armas, eo amin'ny lapan'ny Inca Wiracocha, no misy ny Katedraly Cuzco ankehitriny iray amin'ireo ohatra miharihary indrindra amin'ny Baroque any Peroa ary io no lasa tempoly kristiana manandanja indrindra amin'ny tanàna iray manontolo.
Tonga tao amin'ny firenena ny Fiangonana niaraka tamin'ny Espaniôla monina ary niaraka taminy, toeram-pivavahana sy fivoriambe katolika maro no naorina tao an-tanàna. Tamin'ny 1973, Ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena dia nanambara ny lova ara-kolontsain'ny firenena ho any faritra lehibe ao Cuzco, mamantatra ny hatsarana sy ny lanjan'ireo tantara ireo. Raha mandeha mamaky ny Cuzco mampiavaka anao ianao, ny Church of the Company sy ny Temple of Mercy dia fitsidihana tsy maintsy atao.
Fantaro ny tanàna amin'ny fomba fijery hafa
Ny fitsidihana dia tsy fitsidihana tranobe fotsiny sy tsangambato tandindona. Indraindray, maka sary tena izy isika amin'ny tanàna mirenireny tsy misy tanjona mamakivaky ny arabeny na mitsidika ny tsena eo an-toerana ary mijery ny hetsika isan'andro.
Ny lova ara-tantara sy goavana an'ny Cuzco dia tsy azo iadian-kevitra, fa izany ihany koa tena marina ny tanàna. Raha mitady hampamono ny kolontsaina Peroviana ianao ary maniry izany ampahafantaro amin'ny fomba fijery hafa ity firavaka ao Però ityTandremo ireo toerana izay hatolotro anao eto ambany.
Ny tsenan'i San Pedro
Any akaikin'i Calle Santa Clara, ny Mercado de San Pedro, natsangana tamin'ny 1925, dia mitohy ivon-toeran'ny varotra eo an-toerana ao Cuzco. Ny vokatra vaovao, ny asa tanana nentin-drazana, ny voninkazo, ny zava-manitra, ny tsindrin-tsakafo mahazatra dia mihangona isaky ny toerana, mamorona a fipoahana loko sy tsiro izay mandroboka anao tampoka amin'ny kolontsaina peroviana.
Handre olona miteny amin'ny fiteny Quechua ianao, mpivarotra marani-tsaina manandratra ny feon'izy ireo hametraka ny fisiany farany ary ianao dia ho anisan'ireo mpizahatany tsy manan-tsaina izay mifangaro amin'ny mponin'i Cuzco izay tonga mividy eo isan'andro ary tsy variana amin'ny antsipiriany intsony. isaky ny toerana.
Andramo ny tsindrin-tsakafo, ny sakafo mahazatra (am-pitandremana raha manana vavony marefo ianao), mifampiresaha amin'ireo mpivarotra ary atsofohy izay rehetra mandalo ny masonao. Raha liana amin'ny gastrolojia ianao ary te hahalala ny kolontsaina Peroviana aloha, ampidiro ao amin'ny lisitr'ireo "zavatra hatao any Cuzco" ny Mercado de San Blas.
Izaho manokana, iray amin'ireo zavatra voalohany tiako hatao rehefa tonga vaovao amin'ny tanàna aho dia ny miakatra amin'ny fomba fijery, ny avo kokoa no tsara kokoa, mankasitraka ny refy. Pukamuqu, no toerana mety indrindra handinihana ny Cuzco avy any amin'ny avo.
Any amin'ny 30 minitra miala eo afovoan'ny tantara, eo akaikin'ny sarivongan'i Kristy Fotsy, Pukumaqu dia fomba fijery voajanahary izay hanome anao fahitana tsy hay hadinoina momba ny tanàna. Ny firafitry ny arabe, ny tafo mavomavo, ireo tranobe mivondrona ao an-dohasaha sy ny havoana eny lavitra eny, dia mamorona sary malalaky ny Cuzco izay tsy ho azonao atao ny tsy mitia anao.
Inona ireo fitsangatsanganana azonao atao avy any Cusco
Any amin'ny 2.430 metatra ny haavony ary eo afovoan'ny ala tropikaly dia i Machu Picchu. Ny tanàna Inca fahiny, voahodidin'ny tendrombohitra, dia nanjary iray amin'ireo toerana notsidihina indrindra eto an-tany ary Izy io dia heverina ho iray amin'ireo zava-mahatalanjona 7 amin'ny tontolo maoderina Tsy gaga aho! Ireo tavela amin'ny maritrano, rindrina, terraces, dia hita eo amin'ireo rahona izay manome majika sy rafi-miafina tena manokana.
Hay drafitra maro handehanana mankany Machu Pichu Avy any Cuzco, afaka mankany ianao amin'ny alàlan'ny maimaimpoana (amin'ny lamasinina, amin'ny fiara, na amin'ny fiara fitateram-bahoaka) na amin'ny alàlan'ny fanofana ny serivisy misahana ny masoivoho iray. Ny tokony ho ao an-tsainao raha mandeha samirery ianao dia, toerana iray manana lanja ara-tantara avo toy izany, henjana ny lalàna momba ny fitsidihana ny valan-javaboary: tsy afaka miditra afa-tsy amin'ny alàlan'ny torolàlana ofisialy ary tsy maintsy mividy ny tapakila ianao. Andramo atao mialoha ireo dingana roa ireo, raha vantany vao mamandrika ny dianao ianao, satria toerana be olona toy izany ary voafetra ny fahafaha-manao, dia mety ho very ny fotoana hahalalanao azy.
Maras dia a tanàna mahafinaritra any Peroa, miorina 3.300 4 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina ary manodidina ny XNUMX km miala an'i Cusco. Ilay tanàna kely dia fantatra amin'ny rakotra sira. Miorina amin'ny terraces, ny lavadrano mihoatra ny 3 arivo ny sira voajanahary manamboatra tontolo miavaka izy ireo izay tsy hamela anao tsy hiraharaha. Ankoatr'izay, ao anatin'ny toeram-pitrandrahana sira, dia amidy ireo vokatra vita amin'ny sira nalaina. Raha te hitondra fahatsiarovana ho an'ny olona iray manokana ianao dia afaka manararaotra ireo toerana ireo, amin'izay dia azonao araraotina izany raha te hividy fanomezana na fahatsiarovana tena izy ianao.
Azo atao izany mankanesa any Maras amin'ny bus avy any Cuzco ary avy eo maka taxi avy any Maras hahatratra ireo valan-tsira. Safidy iray hafa ny manakarama ny sasany amin'ireo fitsangatsanganana atolotry ny masoivoho fizahantany izay misy fitaterana. Misy masoivoho manolotra ny mety hahatratra ny toeram-pitrandrahana sira amin'ny bisikileta na quad. Mahatalanjona ny traikefa, soso-kevitra tokoa raha mitety vondrona ianao.
Torohevitra azo ampiharina amin'ny dianao mankany Cusco
Ahoana ny fanovana vola any Cusco
Mora ny manova vola any Cuzco, misy trano fifanakalozana na aiza na aiza, indrindra ao amin'ny foibe manan-tantara, ary mazàna dia mitombina ny taha. Alohan'ny hanovana azy dia ataovy amin'ny kajy anao manokana ny kaonty, amin'izay dia ho fantatrao hoe ohatrinona no omeny anao ary tsy mila mandalo olana amin'ny fitakiana vola ianao raha misy lesoka dia ho hitanao avy eo.
Eo amin'ny manodidina ny trano fifanakalozana sy amin'ny arabe feno afovoan'ny foibe no anoloran'izy ireo anao miova ho mainty. Na dia toa mahasoa kokoa aza ny fanovana, Tsy manoro izany aho satria afaka mangalatra faktiora sandoka ao aminao izy ireo nefa tsy hitanao akory.
Ahoana ny fomba handehanana any Cuzco
Soa ihany, Cuzco dia tanàna iray rakotra tongotra tsara izy io. Na izany aza, mety mila mandehandeha kely ianao avy eo afovoany manan-tantara ary mety te-hitsidika toerana lavitra ianao, koa omeko anao ny torolàlana momba ny fitaterana any Cusco.
Taxi ao Cuzco Tena mora vidy izy ireo, famindra toerana dia eo amin'ny faladia 10 Peroviana (mitovy amin'ny 2,28 euro). Raha miditra amin'ny vondrona ianao dia safidy tsara izany ary fandaniana mora vidy tokoa.
Raha ny mahazatra dia manao ny marina ny olona. Na izany aza, amin'ny maha mpizahatany antsika dia mety hampidi-doza ny vidintsika na hiditra amin'ny taxi-piraty isika nefa tsy fantantsika (any Cuzco misy) Mba hisorohana an'io karazana toe-javatra io dia tsara kokoa ny manakana olona iray eny an-dalambe ary manontany hoe ohatrinona ny dia matetika. Hanome anao ny vidiny izay hanampy anao hitsara raha manome anao ny tena vidiny ny mpamily taxi. Alohan'ny handehanana dia miezaha hanaiky ny taha amin'ny mpamily, hisoroka olana ianao. Na izany aza, tsy maintsy milaza aho fa tsy nahita karazana olana.
Bisy ao Cuzco Orinasa tsy miankina no mitantana azy ireo. Ny fiara tsirairay dia samy manana ny famantarana milaza izay alehany. Manodidina ny 0,70 ny vidin'ny tapakila, izay sahabo ho 15 cents eo ho eo ary mandoa ao anatin'ny bus ianao. Mitranga matetika izany, isaky ny roa na telo minitra.
Tapakila fizahantany Cusco
Mahagaga tokoa ny tapakilan'ny Cuzco Tourist. Izy io dia miasa toy ny karazana tapakila ahafahana miditra amin'ireo toerana mahaliana ny mpizahatany ao amin'ilay faritra. Misy karazana tapakila isan-karazany: ny tapakila fizahan-tany tsy miankina, izay ahafahanao mitsidika toerana 16; ary tapakila ampahany, izay mamela ny fidirana amin'ny toerana sasany ao amin'io lisitra io.
Raha ho any Cuzco lava ianao dia tsy hieritreritra an'izany aho. Na dia tsy misy ny fidirana ao amin'ny Machu Picchu aza ny BTC dia mendrika izany ary maneho fitehirizana lehibe rehefa miditra amin'ireo toerana marika indrindra eto an-tanàna.
Tsy mitovy ny mitsidika an'i Cuzco irery fa tsy miaraka amin'ny fanampian'ny mpitari-dalana. ny fitsidihana maimaimpoana ny tena atoro ho an'ireo mpandeha te hahafantatra ny antsipirian'ny tantara isaky ny zoro izay hitany ao amin'ny renivohitra taloha an'ny Fanjakana Inca.
Misy orinasa samihafa mandamina azy ireo ary, mazàna, miala amin'ny afovoan-tanàna manan-tantara izy ireo. Tsotra be ilay fandidiana, misoratra anarana ianao (azonao atao amin'ny alàlan'ny Internet) ary amin'ny faran'ny fitsidihana dia omenao ny mpitari-dalana ny vola heverinao fa mety.
Mitandrema amin'ny aretina any an-toerana!
Noho izy metatra maro ambonin'ny haabon'ny ranomasina dia azon'ny mpizahatany mitsidika an'i Cuzco ny "aretina". Na dia tsy mahafinaritra aza izany ary misy ireo izay manana fotoana tena ratsy Matetika mitranga izany rehefa tonga tao an-tanàna nandritra ny roa andro ianao. Ny hamafin'ireo soritr'aretina dia miankina amin'ny tranga tsirairay, fa matetika dia mitarika fanina, maloiloy ary aretin'andoha.
Mba hisorohana ny aretin'ny haavon'ny toerana dia tsara indrindra miala sasatra be, aza mihinana sakafo be loatra, ary misotroa rano be. Eo izy ireo mitsako ravina coca hiadiana amin'izany. Raha anisan'ireo mijaly amin'ny soritr'aretina matotra indrindra ianao ary ny "aretin'ny altitude" dia manelingelina ny dianao, afaka manatona farmasia ianao, misy fanafody sasany manamaivana azy.
Rano sy sakafo
Raha vahiny ianao, tsy tsara ny misotro rano avy amin'ny paompy any Peroa. Na dia mandray izany tsy misy olana aza ny Peroviana sasany, mety ho ianao, izay tsy zatra azy io, no mety hahatonga anao hahatsiaro ho ratsy. Ny tsara indrindra dia ny tsy maka risika ary misotro rano voasivana na anaty tavoahangy ihany.
Raha ny sakafo, dia zavatra mitovy no mitranga. Tsy hoe ratsy na simba ny sakafon'ny arabe, fa mety ho mahery setra amin'ny vavony tsy zatra. Tandremo izay ezahanao ary mitondra fanafody antidiarrheal, sao sanatria.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no hatao any Cuzco (Peroa): torolàlana azo ampiharina amin'ny fitsidihanao ny tanàna